I-Rendysc VIP Apk Landa i-Free For Android [Apk FF Cheat]
Posted: April 2, 2021 Kwangathi 25, 2021
I-Rendysc VIP iyisengezo esisha ohlwini lwamathuluzi aphezulu futhi athembeke kakhulu wokuguqulwa kwi-Garena Free Fire. Abanye benu kungenzeka ukuthi sebevele bazi ngaleli thuluzi yingakho nabafana nilapha. Kodwa-ke, uma ungazi ngalokho, funda le ndatshana futhi uzokwazi ngakho.
Sabelane ngethuluzi le-Rendysc VIP FF labasebenzisi beselula be-Android. Lokhu kukuvumela ukuthi uxhaphaze abaphikisi bakho futhi ubasize. Iningi lenu lingaba yi-noob futhi alazi ukuthi lidlalwa kanjani iFree Fire. Kepha ngaleli thuluzi ungadlala kalula umdlalo ngaphandle kwesithiyo.
I-Rendy Mod VIP iyithuluzi lakamuva elenzelwe ukufaka kalula ukuguqulwa kumdlalo. Yingakho sabelane ngalolu hlelo lokusebenza kokuthunyelwe kwanamuhla. Ngiyethemba nina bazokwazi ukuzuza kuleli thuluzi. Ngalokho udinga ukulanda inguqulo entsha yohlelo lokusebenza kuleli khasi.
Yini iRendysc VIP?
Ungayisebenzisa Kanjani iRendysc VIP?
I-Rendysc VIP imenyu entsha ye-mod ye-FF. Kunohlu olukhulu lwamakhesi ongalusebenzisa kulo mdlalo ngaphandle kwaluphi uhlobo lokuloba umbhalo noma ifayela. Ngakho-ke, lokhu kubonakala kuthakazelisa kakhulu futhi kulula. Ngaphezu kwalokho, kuyaphikisana futhi ama-akhawunti akho aphephile ngokuphelele futhi ngeke ulimaze amadivayisi akho.
Uma uyi-noob futhi ubhekene nezinkinga ekuhloseni abaphikisi bakho, khona-ke iRendy Mod VIP ilapha ukukusiza. Ngoba ine-Auto-Aim inketho ekuvumela ukuthi ungagcini ngokuhlose ngokuphelele kodwa futhi ukushaya nokulimaza izitha. Kungakho kukhetheke kakhulu ukuthi abadlali banqabile kulo mdlalo.
Noma kunjalo, akukhathalekile ukuthi u-pro noma i-newbie, inenzuzo efanayo kubo bonke abasebenzisi. Ngakho-ke, ngaphandle kokuchitha noma yimuphi omunye umzuzu, ngincoma nje ukuthi ulande bese uyizama wedwa. Ngemuva kwalokho, uzokwazi ukwazi ngezici ezinhle zale Rendysc VIP 1.50.2 entsha ku-phennt.
Muva nje iGarena Free Fire ibuyekeze ipulatifomu yabo yemidlalo esemthethweni. Ngakho-ke, bavuselele nezihlungi zokuphepha. Ngakho-ke, amathuluzi amadala awasasebenzi. Ngakho-ke, le menyu entsha yemodeli izokusiza. Sinezinhlelo zokusebenza ezifanayo ezifanayo lapha kule webhusayithi. Ungathola futhi lezo ezivela ku-Apkshelf.
Kunguhlelo lokusebenza lweselula lwamahhala olunganikezeli noma yiziphi izinhlobo zezici ze-premium. Ngakho-ke, ungakujabulela mahhala ngokuphelele. Kodwa ukuyibeka ngokweqiniso kuyithuluzi elingekho emthethweni elingaba yingozi kuma-akhawunti akho. Ngakho-ke, manje kukuwe ukuthi ufuna ukuba nayo noma cha.
Igama I-Rendysc VIP
Usayizi 2.63 MB
Igama lephakheji com.rendymod.vip
Khumbula ukuthi kuningi okuzayo okuzayo. Ngakho-ke, lokhu akuyona ukuphela kokukhohlisa noma kokugcina ozoba nakho eRendysc VIP. Ngakho-ke, awudingi ukukhathazeka ngalokho. Kepha okwamanje ungaphatha ngokusebenzisa lawa ma-hacks futhi lawa anele kunoma yimuphi umdlali we-noob.
Inikeza inketho ye-Auto-Aim ngenhloso yokuhlose abaphikisi futhi ibaqede kalula.
Futhi ungavumela inketho ye-Headshot.
Ungakhuphula inani lokulimala cishe kwazo zonke izibhamu kuFree Fire.
I-Wallhack iyatholakala kulabo abafuna ukubona izitha ngemuva kwezindonga, izakhiwo, nezihlahla.
Izinhlobo ezahlukene zesikhumba seZikhali Nezinhlamvu.
Izithombe zangemuva nazo zikhona ukwenza indawo yakho yokubhalela ibukeke imangalisa.
Isibonisi esilula futhi esisebenziseka kalula senza kube lula kuwe ukuthi usisebenzise.
Kumahhala futhi akunikezeli izinketho zeprimiyamu nhlobo.
Futhi kuningi okuzayo esikhathini esizayo.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, udinga ukulanda ifayela lephakheji kuleli khasi. Bese uyifaka kwizingcingo zakho. Kamuva qala lolu hlelo bese uya esiteshini se-YouTube esisemthethweni salolu hlelo lokusebenza. Lapho uzothola isibuyekezo esisha uma sikhona. Manje vula lolo hlelo lokusebenza futhi unike amandla okukhohlisa.
IGarena Free Fire ngumdlalo wokusinda wamadivayisi we-Android. Ungazizwa unzima ngokuqinile ekuqaleni kwalomdlalo, khona-ke uzokwazi ukucasha kwabanye abadlali ukuze ungabulawa ezandleni zabanye abaphikisi abangama-49.
Zama amanye amathuluzi axhumeka lapha.
Lokhu ukuphela kokubuyekezwa kwanamuhla. Ngakho-ke, manje ungalanda inguqulo yakamuva ye-Rendysc VIP Apk. Chofoza kusixhumanisi sokulanda esiqondile esinikezwe ngezansi ukuthola ifayela le-Apk.
Posted in AmathuluziUmake I-Rendy Mod VIP, I-Rendysc VIP, I-Rendysc VIP 1.47.0, I-Rendysc VIP 1.50.2, I-Rendysc VIP Apk, I-Rendysc VIP FF, I-Rendysc VIP Umlilo wamahhala
4 imicabango on “I-Rendysc VIP Apk Landa i-Free For Android [Apk FF Cheat]"
Disemba 16, 2020 ku-2: 47 am
Tolong bantu ukukopela ff
Disemba 22, 2020 ku-9: 00 pm
BANTU bakhohlise ff
March 5, 2021 ku-1: 18 am
pitha marndi uthi:
Apreli 9, 2021 at 12: 37 pm
Mujhe Hack bala app chahia